Izinqubomgomo zezomnotho | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Yini i-CIF noma i-Tax Identification Code, funda ukuyibala, uyiqonde futhi wazi ukuthi isetshenziselwani, amaphuzu asemqoka okufanele ubhekane nawo
Izinhlobo zezinkampani ze-mercantile eSpain
Buyini ubambiswano? Futhi yiziphi izinhlobo zemiphakathi ezikhona? Kulesi sihloko sizophendula le mibuzo, ukuze uthathe isinqumo
Isimo esibucayi esivelayo sibeka izimakethe
Isimo ezinye zezindawo okuthiwa ezomnotho osafufusa ezidlula kuzo, eziqhutshwa yinkinga yaseTurkey nase-Argentina, siya kulesisimo ezinye zezindawo okuthiwa ezomnotho osathuthuka ezidlula kuzo yiso esidala ukuwa kwemakethe yamasheya
Sizophendula ukungabaza kwamarejista wabasebenza emphakathini ukuze sicacise imibuzo engase ivele
Yini i-APR futhi isetshenziswa kuphi?
I-APR yisifinyezo sokuthi isilinganiso esilinganayo sonyaka sisho ukuthini futhi iyigama lezezimali elisetshenziswa ngokuvama okukhulu ukuthola uhlobo lwe-APR yisifinyezo sokuthi isilinganiso sonyaka esilinganayo siyini futhi liyigama lezezimali elisetshenziswa kakhulu imvamisa
Cacisa umbuzo obalulekile kubo bonke abantu abazisebenzayo, okuyinkampani enesikweletu esilinganiselwe futhi uma nginentshisekelo yokuzisebenza noma ukuba yi-SL
I-ROA, ivela egameni lesiNgisi elithi "Return On Assets", yaziwa nangokuthi "Return on Investments" noma i-ROI. Imayelana nemingcele yezezimali
I-ROE, yi-Return on Equity, ethola isichasiso esithi, "Return On Equity" isebenza njengenye yamathuluzi amakhulu
Izinhlamvu zemali ezimbili zesikhumbuzo se-euro
Akungabazeki ukuthi izinhlamvu zemali zakha imakethe enkulu. Esinye sezibonelo ezigqame kakhulu yisimo semali eyisikhumbuzo yama-euro amabili.
Vele, i-stagflation ingelinye lamagama ezomnotho asebenze kakhulu eminyakeni yamuva ngenxa yezizathu ezilula kakhulu.I-stagflation ngesinye sezimo ezimbi kakhulu, hhayi kuphela kwezomnotho jikelele, kepha futhi ibandakanya nezimakethe.
Yini i-Index ye-Gini?
Ngalesi sikhathi sizokhuluma nge-Gini Index yalokhu, sizokwethula kafushane ngokuthi iyiphi inkomba nobudlelwano bayo nejika leLorenz
Izindawo zokukhokha intela ngokuyisisekelo ziyisizwe noma indawo ebonakala ngokutholakala kwayo noma ikakhulukazi ngentela yayo ephansi
Isitatimende semali engenayo yinqubo yentela okuzodingeka uyenze minyaka yonke ukubhekela imali engenayo evela emsebenzini, kodwa futhi nokutshalwa kwemali
Ukubuyela ekuvikeleni nasekunyukeni kwamanani kulimaza imakethe yamasheya
Ukuvikelwa nokukhuphuka kwenzalo e-United States kuholela ezimakethe zamasheya ukwehlisa amanani ezokuphepha ezisohlwini
Ukubaluleka kwemakethe yezimali yakwamanye amazwe emnothweni
Imakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe ingenye ehambelana kakhulu emhlabeni ngoba inika inani kuzo zonke izimali zomhlaba wonke ekusebenzeni kwalo
Isebenza kanjani imali ebolekwayo?
Yisikhathi sokuthi uzibuze ukuthi ngabe imali ebanjwayo kufanele itholakale ngesilinganiso esinqunyiwe noma ngokuphambene nalokho kuzoba ngcono ukuqhubeka nokuguquguqukayo
Uma uneholo elizinzile elikuvumela ukuthi ubhekane nazo zonke izidingo zakho ngaphandle kwenkinga, ungabona ukonga njengokungenasidingo nokuthi kuzokususa kuphela imali ongayisebenzisa ngokushesha.
Impahla noma Impahla: Amanani, ithonya, ukuguquguquka
Igama lezimpahla nalo lihlobene kakhulu nokuthengiswayo. Ngokwanda kokuhwebelana kwempahla, imiqondo emisha ngaleli gama
Sasibikezelwe kanjani isimo somnotho waseSpain sango-2017?
Unyaka we-2017 usuzophela, uma usuphelile, kuzokwazi ukucabanga ngomnotho waseSpain kulesi sigaba, esidlulile nokuthi uphele kanjani kulo nyaka
Ungazishiya kanjani Izikhungo Zezikweletu?
Ukushiya i-ASNEF kungenye yezinkinga ezithakazelisa kakhulu abantu okwamanje abase ...
Izindleko eziseceleni, ukuthi ziyini kanye nomthelela wazo emakethe yezomnotho
Singazichaza izindleko eziseceleni ngezindlela eziningana, yize lokhu kuyiso esinembe kunazo zonke isilinganiso soshintsho olukhona kunikezwe ushintsho ekukhiqizeni.
Indawo yokuhlanganyela ehlangene yabantu abajoyina futhi benze ingcindezi ethile enenhloso yokuqondisa izinqumo zesikhungo sezepolitiki noma sezezimali
Yini i-playpen yezezimali
Lapha sizophendula eminye yemibuzo ebaluleke kakhulu ukuqonda i-playpen yezezimali.
Phatha izimali zethu kahle. Kulesi sihloko sizokhuluma ngqo ngokudonswa kwemali ekutshalweni okuvamile.
Yini ama-Bitcoins futhi angatshala kanjani kule cryptocurrency?
Ama-Bitcoins, thola ukuthi ayini nokuthi kuphephe kangakanani futhi kunenzuzo kangakanani ukutshala imali kule cryptocurrency. Thola ukuthi ungathenga kanjani futhi uthengise ama-bitcoins ngeziqinisekiso.
Imali engaguquki, iyini futhi yenzelwe ini? Sikutshela konke mayelana nezimpahla izinkampani ezinazo njengengxenye yenqubo yazo yokukhiqiza.
Ushwele wentela eSpain
Ukukhuluma ngokuxolelwa kwentela eSpain, okokuqala kudingekile ukwazi incazelo yegama elithi "ushwele" kwasekuqaleni.
Elinye lamagama okufanele lisithakazelise, futhi nokho elihlala lingaqashelwa intshisekelo yezimali esemthethweni
Yini iModeli 720?
Imodeli yesimemezelo i-720 iyimodeli evunyelwe kusukela ngo-2012 futhi yenziwa ngokuya ngemithetho yentela neyezezimali
Ungayibika kanjani imali engenayo yakwa-Adsense
Dala iwebhusayithi yakho noma uhlobo oluthile lwensizakalo eku-inthanethi ungasebenzisa uhlelo lwe-Adsense ukwenza imali ngokubonga okuvakashelwayo ku-inthanethi
Sizokhuluma nawe ngezindleko ezivame ukudonswa ongazibeka esitatimendeni senyanga sabantu ...
Ubhalisa nini njenge-freelancer
Into yokuqala okufanele uyenze ukubhalisa njengomuntu ozisebenzelayo. Ngalokhu kufanele ukwenze ngaphambi kokuphepha komphakathi naphambi kwe-ejensi yentela.
Isitatimende semali engenayo ehambisanayo
Isitatimende semali engenayo eyengeziwe, ukuze imininingwane esiyibeke kabi ingalungiswa nokuthi izibalo zinembile.
Omunye wemibuzo abantu abaningi abanayo ngukuthi, kuthatha isikhathi esingakanani ukungibuyisela ibhalansi esivuna engishiye esitatimendeni sami semali engenayo?
I-akhawunti ehamba phambili yokukhokha
Ama-akhawunti amahle kakhulu okukhokha onyaka futhi, njengoba sekubonile eminyakeni eyedlule, ngomunye futhi unyaka lesi simo siphinde siholwa yi-akhawunti yabasebenzi beBankinter.
Inzalo eyengeziwe kwizimali: yiziphi izizathu?
Izimali zombili ziye zaba ngumkhiqizo oqashwe kakhulu ngabatshalizimali ukwenza ukonga kwabo kube nenzuzo, uyazi ukuthi kungani?
Umkhiqizo ophelele wasekhaya (i-GDP) noma inani eliphelele lemakethe lazo zonke izimpahla zokugcina nezinsizakalo ezikhiqizwa ezweni ngonyaka
Inkomba ye-CPI noma yamanani wabathengi iyinkomba yemali lapho kwenziwa khona ukubalwa kwenani lamanani ohlobo lwe-athikili.
Ngabe ukungazinzi komhlaba kunganciphisa ukuvuselelwa komnotho?
Ukusimama komnotho kungaphazamiseka ukungazinzi kwezimakethe, yini amalambu nezithunzi zomnotho womhlaba?
Yiziphi izimo lapho ukwehliswa kwesimo kubeka phakathi kwabathengi?
I-Deflation ingenye yezinhlangano eziyingozi kakhulu kwezomnotho ezenzelwe izakhamizi, ngabe uyafuna ukwazi izizathu?
Ukwehla kwamazinga wenzalo kuzokuthinta kanjani?
Ukwehliswa kwezinga lenzalo ku-euroza kuzofaka imiphumela eminingi ozokwazi ukuyibona kusukela manje, ingabe ufuna ukwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo yasebhange?
Ukulahleka okuye kwaba khona ezimakethe zomhlaba kungenxa yokuthi iChina ingomunye wabathengi abakhulu emazweni amaningi
UPodemos ukhethe ukuthola usizo lukaVicenç Navarro noJuan Torres, abanikeze uhlaka ngezinyathelo zikakhonkolo.